भीमदत्तको ब्रह्मदेबमा दुई करोडको सडक कालोपत्रे सुरु | सुदुरपश्चिम खबर
भीमदत्तको ब्रह्मदेबमा दुई करोडको सडक कालोपत्रे सुरु
महेन्द्रनगर । भीमदत्त नगरपालिका ९ ब्रह्मदेबमा नाली सहित कालोपत्रे सडक निर्माण सुरु भएको छ । भीमदत्त नगरपालिकाले सिद्धनाथ सामुदायिक वन नजिक नगर चक्रपथदेखि ब्रह्मदेब बजारको भारतीय सीमासम्म सडक कालोपत्रे गर्न लागेको हो ।
सडकको कालोपत्रे निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ । भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्टले सडक कालोपत्रेको शिलान्यास गरेका छन् ।
भीमदत्त नगरपालिकाले ब्रह्मदेबस्थित सामुदायिक वन नजिक सडकलाई जैविक धार्मिक पर्यटकीय मार्गसित जोडेर नगर चक्रपथ बनाउन लागेको छ । नगर चक्रपथको ब्रह्मदेब तिल्केनी खण्डमा यस अघि नै कालोपत्रे सुरु भई सकेको छ ।
सामुदायिक वन नजिकको सडकलाई ब्रह्मदेब बजारको पश्चिमपट्टि हुँदै भारतीय सीमासम्म ६ सय ७० मिटर सडक कालोपत्रे गर्न लागिएको हो । नाली सहित सडकको पाँच दशमलव पाँच मिटर चौडाईमा कालोपत्रे गरिनेछ ।
एक करोड ९५ लाखमा ठेक्का दिइएको सडक निर्माण कार्य एक वर्षपछि पूरा हुनेछ । कैलाश राखी निर्माण सेवाको जोइन्ट भेन्चरले सडक निर्माणको ठेक्का लिएको छ ।
सडक कालोपत्रे निर्माण कार्यको शिलान्यास गर्दै मेयर विष्टले भीमदत्तलाई समद्ध नगर बनाउने लक्ष्य अनुसार पूर्वाधार सहितका विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।
शिलान्यास कार्यक्रममा भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता हिमाल बहादुर चन्द सहित वडा नं. १८ का अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेय, वडा नं. ७ का अध्यक्ष शंकर बहादुर कुँबर, वडा नं. ९ का अध्यक्ष राम नाथ लगायतका सहभागी भएका छन् ।बिकल्प दैनिक